TORA AH-1W Super Cobra AlphaSim FSX - Rikoooo
Downloads 31 604
Created 30-01-2011 18: 53: 51
Akachinja 03-09-2012 23: 18: 36
Munyori: AlphaSim http://www.alphasim.co.uk/
wedzera-pasi zvinoshamisa Eks payware zvino freeware kuti uchandida.
AlphaSim AH-1W Features nokuda FSX
1. Zvikuru yepamusoro womuenzaniso, textures uye rakapotsa Cockpit
2. Full FSX wokuenzanisira yaisanganisira nomwoyo FSX zvinhu (dhumhira nzvimbo ine, kuzvicheka-mumvuri, etc.).
3. Zvikuru zvechokwadi rakapotsa Cockpit pamwe Animations uye (vamwe) mouseable haizoshandisi
4. Authentic-XML zvose 2D emadziro, tsika abuda kuti redhiyo wemagazini, zvizere mouseable.
5. Zvikuru chaizvoizvo vashandi manhamba kuoneka panze maonero. Vashandi Nhamba toggled nokudzimwa rechipiri mbudo murayiro (Shift-E + 2).
6. Rotor mashizha vakagarwa kuratidza kuoneke / aft uye kuruboshwe / rworudyi kurereka (FS9 chete).
7. Animated chirebvu pfuti (pamusoro chidhiraivho chiyamuro).
8. Animated vashandi mikova (Shift-E).
9. Virtual Cockpit mvura zvinokonzerwa (FS9 chete).
Kuchinja-1 Havasisina chikuru Cockpit Panel pamusoro uye kure Cockpit maonero.
Kuchinja-2 Anoratidza ari Radio Stack.
Kuchinja-3 Anoratidza mureza GPS.
1. The tailhook up / pasi murayiro (anofanira kupiwa anokosha kana joystick bhatani) huchabvisa zvombo kubva bapiro pylons. Uchazoti manually kubvisa payload dzemapurisa vari Fuel uye Payload nhaurirano bhokisi yokugadza akakodzera uremu nokuda yakachena neherikoputa.
2. Detailed kuongorora uye bhuku nemakadhi zvinowanikwa muna kneeboard (F10).
3. Rear kanopi kiyi sitiroko inobvisa mutyairi nenhamba kubva muenzaniso
Zvinokosha chaizvo kuverenga bhuku pamusoro neherikoputa ichi (Tarisai "Start" Muterere "Rikoooo wedzera-wanda, etc.)
Downloads: 9 347
Downloads: 27 025
Downloads: 15 697
Downloads: 13 626